Jọshụa 6 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
6 E mechisiri ọnụ ụzọ ámá Jeriko ike n’ihi ụmụ Izrel, ọ dịghị onye na-apụ apụ, ọ dịghịkwa onye na-abata abata.+ 2 Jehova wee sị Jọshụa: “Lee, enyefewo m Jeriko na eze ya, na ndị dimkpa bụ́ dike, n’aka gị.+ 3 Unu niile bụ́ ndị ikom na-aga agha ga-aga obodo ahụ gburugburu. Unu ga-aga obodo ahụ gburugburu otu ugboro. Otú ahụ ka ị ga-eme ụbọchị isii. 4 Ndị nchụàjà asaa ga-eji opi asaa e ji mpi ebule mee, na-aga n’ihu Igbe ahụ. N’ụbọchị nke asaa, unu ga-aga obodo ahụ gburugburu ugboro asaa, ndị nchụàjà ahụ ga na-afụkwa opi ndị ahụ.+ 5 Ọ ga-erukwa na mgbe ha fụrụ opi asaa ahụ e ji mpi ebule mee, mgbe unu nụrụ ụda opi ahụ, ndị agha niile ga-eji oké olu tie mkpu agha;+ mgbidi obodo ahụ ga-adaru ala,+ ndị agha ahụ ga-agbagokwa, onye ọ bụla ga-aga n’ebe o chere ihu.” 6 Jọshụa nwa Nọn wee kpọọ ndị nchụàjà,+ sị ha: “Burunụ igbe ọgbụgba ndụ,+ ndị nchụàjà asaa ga-eji opi asaa e ji mpi ebule mee na-aga n’ihu igbe+ Jehova.” 7 O wee gwa ndị agha ahụ, sị: “Gaferenụ ma gaa obodo ahụ gburugburu, ndị agha ndị jikeere agha+ ga na-aga n’ihu igbe Jehova.” 8 O wee dị nnọọ ka Jọshụa gwara ndị agha ahụ; ndị nchụàjà asaa ndị ji opi asaa e ji mpi ebule mee, bụ́ ndị nọ na-aga n’ihu Jehova wee gafere fụọ opi ndị ahụ, igbe ọgbụgba ndụ Jehova sokwa ha n’azụ. 9 Ndị agha ahụ jikeere agha nọ na-aga n’ihu ndị nchụàjà ahụ bụ́ ndị na-afụ opi, ebe ndị na-ekpere ha azụ+ so Igbe ahụ n’azụ, na-afụ opi. 10 Jọshụa nyere ụmụ Izrel iwu,+ sị: “Unu etila mkpu, unu emekwala ka a nụ olu unu, okwu ọ bụla agaghịkwa esi n’ọnụ unu pụta ruo ụbọchị m ga-asị unu, ‘Tienụ mkpu!’ Mgbe ahụ, unu ga-eti mkpu.”+ 11 O wee mee ka e buru igbe Jehova gaa obodo ahụ gburugburu, ee, gaa ya gburugburu otu ugboro, e mesịa, ha gara n’ebe ha mara ụlọikwuu wee rahụ n’ebe ahụ ha mara ụlọikwuu. 12 Jọshụa wee bilie n’isi ụtụtụ,+ ndị nchụàjà wee buru igbe+ Jehova, 13 ndị nchụàjà asaa ahụ, bụ́ ndị ji opi asaa e ji mpi ebule mee, nọ na-afụ opi na-aga, ndị agha ndị jikeere agha nọkwa na-aga n’ihu ha, ebe ndị na-ekpere ha azụ so igbe Jehova n’azụ, na-afụ opi.+ 14 Ha wee gaa obodo ahụ gburugburu otu ugboro n’ụbọchị nke abụọ wee laghachi n’ebe ha mara ụlọikwuu. Otú ahụ ka ha mere ruo ụbọchị isii.+ 15 O wee ruo n’ụbọchị nke asaa, ha biliri n’isi ụtụtụ ozugbo chi bọrọ, wee gaa obodo ahụ gburugburu otú ha na-eme, ugboro asaa. Naanị n’ụbọchị ahụ ka ha gara obodo ahụ gburugburu ugboro asaa.+ 16 O wee ruo na nke ugboro asaa ya, ndị nchụàjà ahụ fụrụ opi, Jọshụa wee sị ndị agha ahụ: “Tienụ mkpu;+ n’ihi na Jehova enyefewo unu obodo a.+ 17 Obodo a ga-abụkwa ihe a ga-ebibi ebibi;+ ya na ihe niile dị n’ime ya bụ nke Jehova. Naanị Rehab+ nwaanyị akwụna ahụ ga-adị ndụ, ya na ndị niile ya na ha nọ n’ụlọ, n’ihi na o zoro ndị ozi ahụ anyị zipụrụ.+ 18 Ma unu emetụkwala ihe a ga-ebibi ebibi aka,+ ka ọ ghara ịgụ unu agụụ,+ unu ewee were ụfọdụ n’ime ihe ndị a ga-ebibi ebibi+ ma mee ka ụmụ Izrel bụrụ ihe a ga-ebibi ebibi, wetakwara ya nsogbu.+ 19 Ma, ọlaọcha niile na ọlaedo na arịa ọla kọpa na ígwè bụ ihe dị nsọ nye Jehova.+ Ọ bụ n’ebe a na-edebe akụ̀ Jehova ka a ga-ebuba ya.”+ 20 Ndị Izrel wee tie mkpu mgbe ha fụrụ opi.+ O wee ruo na ozugbo ha nụrụ ụda opi, ndị mmadụ malitekwa iti oké mkpu agha, mgbidi ahụ daruru ala.+ Ha wee banye n’obodo ahụ, onye ọ bụla n’ebe o chere ihu, wee weghara obodo ahụ. 21 Ha wee jiri ihu mma agha gbuo ihe niile nọ n’obodo ahụ, ma nwoke ma nwaanyị, ma nwa okorobịa ma agadi nwoke nakwa ehi na atụrụ na ịnyịnya ibu.+ 22 Jọshụa wee gwa ndị ikom abụọ ahụ gara ledo ala ahụ, sị: “Banyenụ n’ụlọ nwaanyị ahụ, bụ́ nwaanyị akwụna, kpọpụta nwaanyị ahụ na ndị niile bụ́ nke ya n’ebe ahụ, dị nnọọ ka unu ṅụụrụ ya iyi.”+ 23 Ụmụ okorobịa ahụ, bụ́ ndị gara ledo ala ahụ, wee banye kpọpụta Rehab na nna ya na nne ya na ụmụnne ya na ndị niile bụ́ nke ya, ee, ha kpọpụtara ndị ikwu ya niile;+ ha wee mee ka ha nọrọ ná mpụga ebe Izrel mara ụlọikwuu. 24 Ha wee gbaa obodo ahụ na ihe niile dị na ya ọkụ.+ Naanị ọlaọcha na ọlaedo na arịa ọla kọpa na ígwè ka ha debere n’ebe a na-edebe akụ̀ n’ụlọ Jehova.+ 25 Rehab bụ́ nwaanyị akwụna na ezinụlọ nna ya na ndị niile bụ nke ya ka Jọshụa hapụrụ ndụ;+ o wee biri n’etiti Izrel ruo taa,+ n’ihi na o zoro ndị ozi Jọshụa zipụrụ iledo Jeriko.+ 26 Jọshụa wee kwupụta ọbụbụ ọnụ n’oge ahụ, sị: “Ka onye ga-ebili wuo obodo a, bụ́ Jeriko, bụrụ onye a bụrụ ọnụ n’ihu Jehova. Ka ịtọ ntọala ya rie isi ọkpara ya, ka itinye ibo ụzọ ya riekwa isi ọdụdụ nwa ya.”+ 27 Jehova wee nọnyere Jọshụa,+ o wee na-ede ude n’ụwa dum.+